आम्दानीले खर्च पुगेन ? अपनाउनुस् यस्ता १० टिप्सहरु « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
आम्दानीले खर्च पुगेन ? अपनाउनुस् यस्ता १० टिप्सहरु
तपाई म्यानेजमेन्ट विद्यार्थी हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अनिवार्य केही कुरा चाहिन्छ । सामान्य रुपमा अर्थतन्त्रको व्यबस्थापन अर्थात पैसाको सुरक्षा र बचतका लागि महत्वपूर्ण मानिने केही टिप्सहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ । खर्च गर्दा पूर्वयोजना बनाएर बजेट तय गरी गर्नुपर्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान पनि वित्तीय साक्षरताको अर्को उद्देश्य हो । कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने । स्रोत कहाँबाट जुटाउने, कहाँ लगानी गर्ने, आय विश्लेषण, लगानी विश्लेषण कर्मचारी भर्ना विधि, पूँजीगत निर्णय, सम्पत्ति दायित्व, आम्दानी खर्च नगद प्रवाह, रुपैयाँको वर्तमान तथा भविष्यको मूल्यजस्ता वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान दिनु पनि वित्तीय साक्षरता नै हो ।
व्यवसायको विकास र विस्तार, व्यवसाय सृजना तथा प्रर्वद्धन पनि वित्तीय साक्षरताको उद्देश्य हो । वित्तीय साक्षर व्यक्तिले आफ्नो आय वृद्धि गर्न, आफ्नो काम तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने, कति आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सही निर्णय लिन सक्छ । त्यसै गरी ग्राहक सम्बन्ध, बजार व्यवस्थापन, उत्पादन व्यवस्थापन, मौज्दात व्यवस्थापन आदि ज्ञान दिनु पनि वित्तीय साक्षरताको उद्देश्य हो ।
प्रकाशित मिति : आश्विन २, २०७७ शुक्रबार १० : २२ बजे